Shirkii Wasiirada Arrimaha Dibada IGAD oo la soo gaba gabeeyay iyo War murtiyeed laga soo saaray - iftineducation.com
Shirkii Wasiirada Arrimaha Dibada IGAD oo la soo gaba gabeeyay iyo War murtiyeed laga soo saaray
iftineducation.com – Shirkii Wasiirada Arrimaha Dibada Urur Goboleedka IGAD ayaa si rasmi ah loo soo gaba gabeeyay duhurnimadii maanta, kadib muddo saacado ah oo uu shirkan ka socday Hotelka SYL ee ku dhow Xarunta Madaxtooyada.
Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Cumar Cabdirashiid ayaa shirka Wasiirada Arrimaha Dibada IGAD soo xiray, iyadoo khudbad uu uga hadlay muhiimada shirkan ka jeediyay shirka, isla markaana soo dhoweeyay shirkan taariikhiga ah.
Ra’iisul Wasaare Cumar Cabdirashiid ayaa si gaar ah uga mahad celiyay Ciidamada ammaanka Soomaaliya iyo kuwa AMISOM, sidii ay u sugeen ammaanka intii uu socday shirkan iyo qabsoomidiisa, wuxuuna cadeeyay in dowladdu ay xoojin doonto ammaanka iyo hirgelinta federaalka.
Dhinaca kale Wasiirada Arrimaha Dibada IGAD ayaa goor dhow ka dhoofay garoonka diyaaradaha Aadan cadde, kadib shir hal maalin ah, isla markaana ay xalay ku hoydeen magaalada Muqdisho.
Shabaab Oo sheegatay weerarkii Paris ka dhacay In uu ahaa ….